musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » UK inogona kubvisa vanoshandisa zvinodhaka mapasipoti avo izvozvi
Achiyambira avo vanonzi vanoshandisa zvinodhaka 'zvemararamiro', vanhu vepakati nepakati vanotora zvinodhaka zveKirasi A, Gurukota reUK rePolicing Kit Malthouse akati vanhu ava "vari kutyaira mhirizhonga uye kuderera kwatinoona kubva muzvinodhaka zvakazara."
Hurumende yeBritain yaburitsa chirevo chitsva nhasi, ichizivisa mari inosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora (madhora mazana mana emamiriyoni emadhora) mukubvisa zvikwata zvezvinodhaka, uku ichirambidza vanhu kutenga nekutora zvinodhaka zvisiri pamutemo, sezvo kufa kwezvinodhaka muEngland neWales kunosvika. rekodhi mazinga.
Chirongwa chemakore gumi chekurwisa vanotengesa zvinodhaka nevanoshandisa zvinodhaka, chichapa mapurisa masimba matsva ekutorera mapasipoti nemarezinesi ekutyaira kubva. UK vagari.
Achiyambira avo vanonzi vanoshandisa zvinodhaka 'zvemararamiro', vanhu vepakati nepakati vanotora zvinodhaka zveClass A, Gurukota reUK rePolicing Kit Malthouse rakati vanhu ava "vari kufambisa mhirizhonga yakawanda uye kuderera kwatinoona kubva muzvinodhaka zvakazara."
Zvimwe zvezvirongwa zvingangotorwa pasi pezvisungo zvitsva zvekurambidza vanoshandisa zvinodhaka kutorwa kwemapasipoti nemarezinesi ekutyaira, pamwe nekudzikwa kwezvirango zvekufamba husiku.
Achitaura sei UK vagari vanokundikana kubhadhara mari yokuriritira vana vanogona kurasikirwa nepasipoti yavo nerezinesi rekutyaira, Malthouse akataura kuti nzira itsva yoku“pindira” muupenyu hwavanhu kuunza “kuchinja kwetsika” iko zvino inoshandiswa mune dzimwe nzvimbo dzehurumende.
Achidzivirira hurongwa hwekupwanyirwa kwakasimba kwevashandisi vezvinodhaka, Malthouse akati zvaibatsira kuisa matanho aya kubvumidza zviremera kuti zvibatane kubata uye kudiwa muindasitiri yezvinodhaka.
Zvinofungidzirwa kuti pari zvino kune anopfuura zviuru zviviri ematunhu zvikwata zvezvinodhaka zviri kushanda muUK, mapoka anofambisa zvinodhaka pakati pematunhu akasiyana munyika. Kana yavepo, mitemo mitsva iyi yaizoita kuti mapurisa atore nhare kubva kune matsotsi kuti vatore mazita avo, vachisvika kune vanoshandisa zvinodhaka nenzira iyi kuti vavatungamirire kumasevhisi ekutsigira.
Kuziviswa kwematanho matsva kunouya mushure mekuudzwa kuti kufa kubva muchepfu yezvinodhaka muEngland neWales kwakarova rekodhi muna 2020, pakafa vanhu zviuru zvina nemazana mashanu nemazana mashanu nemakumi matanhatu nenomwe, zvichiratidza kuwedzera kwe4,561% pagore rapfuura uye nhamba yepamusoro-soro kubva pakatanga marekodhi zvirikunetsa pakati pevanopa rubatsiro rwenjodzi yehutano hweveruzhinji muUK.